Ciidamada amaanka garoonka cigal oo qabtey nin ajaanib ah oo xawayaan sharci daro ah dhoofineyey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidamada amaanka garoonka cigal oo qabtey nin ajaanib ah oo xawayaan sharci...
Ciidamada amaanka garoonka cigal oo qabtey nin ajaanib ah oo xawayaan sharci daro ah dhoofineyey
Ciidamada amaanka Somaliland iyo masuuliyiinta wasaarada deegaanka Somaliland gaar ahaan waaxda ilaalinta duurjoogta ayaa cabaaro galinkii danbe ee shalay gacanta kusoo dhigay kuna qabtey madaarka Hargeysa 300 oo xayawaanka loo yawaan Caasha badhida oo nin ajanabi ahi si sharci daro ah ugala baxayay waddanka .
Sidaasina waxaa goordhaweyd warbaahinta u xaqiijiyay Gaanshaanle sare Faysal Xiis Cilmi taliyaha laanta danbi baadhida ciidanka booliska Somaliland ahna afhayeenka ciidanka booliiska kaasoo uu kala wareegay Cabdinaasir Axmed Xirsi agaasimaha guud ee wasaarada deegaanka iyo Cabdinaasir Xuseen agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaarada deegaanka Somaliland.
Maaha markii ugu horeysay ee sidan oo kale loosoo qabto dad si sharci darro ah isku dayaya inay dalka ugala baxaan duurjoog gaar ahaan Caasha badhi , balse waxaa isla horaantii sanadkii lasoo dhaafay sidan oo kale loogu qabtey gudaha Somaliland muwaadiniin sita 70 xabo oo Caadha badhi ah kuwaasoo maxkamadi ku xukuntay markii danbe sanad iyo dheeraad xadhig ah .
Ajaanibkan ayaa isna lagu wadaa in lasoo taago maxkamad maalmaha soo socda iyo in dib xoriyadeeda u hesho Caasha badhidan si duurka u xusho .
Xigasho Faysal fifa.
Hormuud foundation gaarsiisay Caawinimo Gedo+sawirro